Kuzolungiswa imigwaqo KwaDukuza | News24
Kuzolungiswa imigwaqo KwaDukuza
Kuzolungiswa imigwaqo yakwa ward 16 kanye no ward 17. x
IMEYA yaKwaDukuza, uMnuz Ricardo Mthembu wethule usonkontileka ozolungisa imigwaqo yaku ward 16 kanye naku ward 17 eStanger Heights ngoLwesine oledlule.
IMeya ibiphelezelwa amalungu omkhandlu, omphakathi kanye namalungu egatsha lika Khongolose waseStanger Heights.
Ukulungiswa kwemigwaqo kuzobiza imali engu-R16, 5 million kanti kuzothatha iminyaka emithathu ukuthi kulungiswe imigwaqo u-Clover, Everest, Thucker, Centenary, Azalea kanye no Manor Drive.
Oyilungu lo mkhandlu waKwaDukuza, uMnuz Sandeep Oudhram uthe sekuphele isikhathi eside abahlali baku lama ward bekhalaza ngesimo semigwaqo.
Uthe umphakathi wagcine udlulise izikhalo zawo kwiMeya emhlanganweni okwaphoqa iMeya ukuba ingenele ukuze kuzotholakala isixazululo.
Oyilungu lo mphakathi, uMnuz Suvir Maharaj uthe: “Sibonga umasipala ngokuthi ugcine uthathe isinqumo sokulungisa lemigwaqo ngoba kade saba nayo le nkinga. Kuyajabisa ukuthi ikhansela laku le ward alikho namuhlanje,” kusho yena.
Elinye ilungu lo mphakathi, uMnuz Lucky Narayan uthe umphakathi uyathemba ukuthi lo msebenzi uzokwenzeka ngendlela efanele ungabi nakho ukuphazamiseka uze ufike emaphethelweni.
IMeya ithe umasipala uzotshala imali ezogcina ingqalasizinda zisesimeni esifanelekile.
UMnuz Mthembu uthe umsebenzi walolu hlobo uzoletha amathuba omsebenzi kubahlali bakwa ward 16 kanye nabakwa ward 17.
Uthe unethemba lokuthi umsebenzi wokulungiswa kwemigwaqo angeke kuphazamiseke futhi uma usonkontileka ehluleka ukwenza umsebenzi ngendlela efanele umasipala uzophoqeleka ukuthi uthole omunye usonkontileka.
Uqhube wathi kubalulekile ukuthi abahlali bethole izimemezelo ngokuthi umsebenzi uhamba kanjani.
Usihlalo we gatsha le ANC eStanger Heights, uMnuz Sanele Mthiyane uthe: “Sithanda ukuncoma iMeya yethu ngokuthi ikwaze ukuphendula izikhalo zomphakathi. Akusimangazi ukungabi khona kwekhansela. Iqembu le ANC lizimisele ekusebenzela imphakathi ngisho nale ehlala ezindaweni eziphethwe amanye amaqembu,” kusho yena.